Pyae Phyo (MMiTD): August 2014
Phone Memory ကနေ SD card ထဲကို app တွေအလွယ်တကူပြောင်းပေးမဲ့ AppMgr Pro III (App2SD) v3.38 APK
Phone ထဲမှာ memory တွေပြည့်နေလို external SD card ထဲကိုပြောင်းချင်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအတွက် ဒီ application လေးကို ဆောင်ထားစေချင်ပါတယ်။ Application တွေကိုအလွယ်တကူ ပြောင်းလဲ နိုင်ပြီး uninstall လုပ်ဖို့အတွက်လဲ တစ်ခါတည်း
Frozen Keyboard ကိုမိမိ ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပုံစံ ပြောင်းကြမယ်
ဒီနည်းကိုတောင်းဆိုထားလို့ ဘာဘီ ရေးထားတာ ကြာပါပြီး ဒါပေမယ့် ဖုန်းပျက်သွားလို့ Page နဲ့ အဆက်သွယ်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားတယ် ဒါကြောင့်နောက်ကျသွားတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်
ဘာဘီမှာ ဖုန်းပဲရှိတဲ့အတွက် ဖုန်းနဲ့ လုပ်တဲ့ နည်းကိုပဲ ပြောပြပါမယ် ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ လုပ်နိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်
Android ဖုန်းအတွင် floder တွေကို passwordနှင့် ပိတ်ထားမယ်Folder Lock Version : 1.0.9 apk
Android ဖုန်းတွေမှာ floder တွေကို lock ချပေးမဲ့ Folder Lock Version : 1.0.9 apk လေးပါဗျာ ။
ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုတော့လူတိုင်းသုံးကြပါတယ် ဒီအထဲက ကိုယ့်ဖုန်းထဲကတချို့အရာတွေသူများကိုပေး
မသိစေချင်ဘူးဗျာ ဥပမာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေပေါ့ တချို့လူတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ online ထဲမှာမိမိအသုံး
ပြုနေတဲ့ Browser တွေ video တွေ သီချင်းတွေနဲ့ အခြားသော pdf ဖိုင်တွေ နဲ့အရေးကြီးမှတ်ထားတဲ့
မိမိသူငယ်ချင်းတွေရဲ့လိပ်စာတွေနောက်လဲအများကြီးကျန်ပါသေးတယ် ပြောရင်ပြောမကုန်ပါဘူးသူများကတောင်းလာလို့မပြဘူးကွာဆိုလဲမကောင်းဘူးလေ ဒါကြောင့်အဲဒီအထက်အခဲတွေကိုဒီကောင်
လေးနဲ့ဖြေရှင်းပေးနိူင်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိပိတ်လိုတဲ့ folder လေးတွေကို password
လေးခံပြီးပိတ်ထားလို့ရပါတယ် အော်.....ကိုယ်ပိတ်တဲ့ password ပါတ်တွေတော့မမေ့စေနဲ့ပေါ့
တော်ကြာသူများကိုမကြည့်စေချင်လို့ပိတ်လိုက်ပါတယ် ကိုယ်လဲကြည့်မရပဲဖြစ်နေမှာကြောင်လို့ေိေိ
အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာ ။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 4mb ပဲရှိပြီး Android : 2.2 ကစလို့အထက်ဖုန်းတွေမှာ
အောက်မှာ Click တစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကကူညီရာရောက်ပါတယ်။ >>>
Android ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေအတွက် ဖုန်းထဲကို message ၀င်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အခြား application တစ်ခုခု (facebook ကဲ့သို့) က Notification ၀င်လာတဲ့အခါ ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်က Flash မီးလေးက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ဖြစ်သွားစေမယ့်ဆော့ဝဲလေး LEDBlinker Notifications v6.0.2 for Android
English ဇတ်လမ်း ၊ သီချင်း ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို Free ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် - Flipps HD - Movies, Music & TV v5.6.3 APK
အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Apk လေးကလည်း အလန်းလေးပါဗျာ။ English ဇတ်လမ်း ၊ သီချင်း ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို ဖုန်းထဲကနေ Free ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ပထမ အကြိမ်တင်ပေး တုန်းကလည်း လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Updater
♪ လုံခြုံစိတ်ချ ခိုင်ခန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေမဲ့ Pixavi Impact2Android Smartphone ♫
သာမာန် Smart ဖုန်းတစ်လုံးဟာ .နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး.။ Pixavi ကုမ္ပဏီကနေ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Impact X ဆိုတဲ့ ဖုန်းလေးကတော့ ပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ..ဘေးအန္တ ရာယ်များတဲ့နေ၇ာတွေမှာတောင် အကြမ်းခံအသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
3G ကော်နက်၇ှင်နဲ့ wifi တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီ.း..။ အကောင်းဆုံးကော်နက်ရှင် ရဖုိ့စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ Android Os 4.2.2 ဖြစ်ပြီး ဖုန်းရဲ့ အောက်ခံကိုယ်ထည်ကိုခိုင်ခံ့မှုရှိစေရန် Alumnium ဖြင့် ထုတ်လုပ်ပေး ထားပြီး ရေ စိုခံနိုင်ပါတယ်။ Battery ကတော့ 8 နာ၇ီကြာ စကားပြောနိုင်လောက်အောင် ခံပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ 400x800 ရှိတဲ့ Resolution တွေနဲ့ နေေ၇ာင်အောက်မှာတောင် စာတွေ ကိုကောင်းမွန်စွာမြင်ရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့အပြင် Bluetooth နဲ့ GPS ပါဝင်ပါတယ်။
မှန်ရဲ့ အထူ ကတော့ 2mmဖြစ်ပြိး 4.3 လက်မ ရှိတဲ့ Screenက တော့ အသုံးပြုသူက လက်အိတ်စွပ်ထား ၇င်တောင် Screen အလုပ်လုပ်စေရန် ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အတိုင်းအတာကတော့ 150mm x 65mm x 12mm ဖြစ်ပြီး အလေးချိန်ကတော့ 200g ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုင်းဆောင်းထားတယ်သူများအတွက် Maven Music Playerတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
ဒီplayer အကောင်းပါတယ် အရုပ်တွေကြည့်ရတော့ယော့ , သီချင်း Video ကြည့်ရတော့ အရမ်းကြည့်လင်
ပါတယ်ဗျာ။ ဖုန်းUers များအတွက် update လိုချင်းသူများအတွက်ကတော့ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Maven Music Player Pro Apk - isapremium music player which delivers all the Maven 3D surround effect which presents dynamic and fantastic sound listeners with real time synchronized lyrics.
Even when using external stereo speakers, multi channel virtual surround effect offers you highly immersive listening environment.
Supported languages as English, Korean, Chinese, Japanese.
အမျိုးအစား: Android Player
ဒီတစ်ခါ Call Recorder လန်းလန်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မိမိ Record လုပ်လိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Setting ထဲမှာသွားပြီး Select ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ Record လုပ်ထားတဲ့လူနဲ့ပြောသမျှကို ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် Record လုပ်ထားမှာပါ။တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အလိုမရှိတဲ့ Record လုပ်ထားတာတွေ
ကိုတော့ SD Card ထဲမှာဖျတ်ပေးရပါမယ်။MP3 High Audio Quality ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Android : 2.2 နှင့်အထက်ကစပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Automatic Call Recorder Pro Apk - record any phone call you want and choose which calls you want to save. You can set which calls are recorded and which are ignored.
အမျိုးအစား: Android Call Recorder
Camera နဲ့ပက်သက်တဲ့ Application တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီ အများကြီးထဲမှာမှ Camera Zoom က လည်းလူသုံးအများဆုံး Application ထဲမှာအပါအ၀င်ပါဘဲ။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး Feature ကတော့ အနီးကပ် ကို ZOOM ဆွဲပြီးရိုက်ချင်သူများအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ။ဖုန်မှာပါပြီးသား ZOOM
အမျိုးအစား: Android Camera Apk
♪ Android သမားတွေအတွက် လုံခြုံရေး အကြံပေးချက်များ (လေ့လာထားသင့်သည်) ♫
1 ) Avoid public WiFi when possible
Public Wifi တွေဟာလှုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ တစ်ထစ်ချပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆီမှာ ခေတ်စား လာတော့မယ့် Onlin Banking စနစ်တွေကိုသုံးတော့မယ်ဆို ဒီလို Public Wifi field တွေမှာ အသုံးပြုတာဟာ အန္တရယ်များပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိမိအိမ်က ဖုန်းData plan နဲ့သုံးခြင်းက ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ public wifi ဆိုတာ လူပေါင်းများစွာသုံးကြတာဖြစ်လို့ စိတ်ချလို့ လုံးဝမရ ပါ..သာမန် အသုံးပြုတာလောက်က ကိစ္စမရှိပေမယ့် Banking စနစ်တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်မချရပါ။ ကျွန်တော်လည်း cyber security သမားမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့အရေးကြီးအချက်အလက်တွေ အွန်လိုင်းမှာသုံးရ တော့မယ်ဆိုရင် သင့် password တွေဟာ bank's sever ဆီကို ပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိမိ private ပေါ်မှာသာလုပ်ဆောင်ခြင်းက အန္တရယ်ကင်းပါတယ်။
2 ) Disable app downloads from unknown sources
ဒီအချက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူတွေနဲ့သိပ်မကိုက်ပါဘူး။ အပြင်က app တွေဆိုတာ ကျွန်တော် တို့အတွက်မဖြစ်မနေသုံးကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် unknonwn sources ကို မအွန်ဘဲမထားနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကလည်းရှိနေပါတယ်။ Android market က app တွေဟာ တစ်ချိန်လုံး လုံခြုံရေးမြင့်မားစွာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီး user တွေကို အနည်းငယ် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာနဲ့ မားကက်မှ လုံးဝဖျက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့. မားကက်မှ တရားဝင်ဒေါင်းလုပ်ယူတဲ့ app တွေဟာ အန္တရယ်မရှိပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲအပြင်ကကောင်တွေ ယူမယ်ဆိုရင်တော့ malware အန္တရယ်တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။app နောက်ကွယ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ code အချို့ကနေ user အချက်အလက်တွေ ကိုရယူသွားတာမျိုးတွေပါ။ ဒီတော့ ခြုံပြောရရင်တော့ မားကက်မှ app များကိုသုံးစွဲခြင်းကသာ အကောင်း ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
3 ) Download an anti-malware app
PC မှာထွက်သမျှ anti malware တိုင်းလိုလို Android version အတွက်ထွက်ရှိကြပါတယ။် ဥပမာ Kaspersky,AVG,Avast and Norton တို့လိုပါ။ ဒါပေမယ့်ဒိကောင်တွေသုံးနေရင်လည်း မိမိဖုန်းRun နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ app ကိုရွေးချယ်မှ အဆင်ပြေတာပါ။ဒါမှမဟုတ်ရင် စက်လေးစေပြန်ပါတယ်။
4 ) Keep all sensitive data behind an extra encryption layer
မိမိအရေးကြီးတဲ့ note တွေကိုဖုန်းမှာထားမယ်ဆိုရင်လည်း encryption လုပ်ထားဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ app တွေအများကြီးပါ။ mSecure or File Hide Expert တို့လိုမျိုးတွေကိုပြောတာပါ။
5 ) Always Use Chrome browser
Android ဆိုတာ Google ကထုတ်တာပါ။ဒါကြောင့် OS မှာပါလာတဲ့ မူရင်း Browser Chrome ကိုသုံးခြင်းက သင့်ကိုပိုမိုလုံခြုံစေမှာပါ။ မိုဘိုင်းမှာပါတဲ့ chrome က ပိုမို လုံခြုံအောင်ပြုလုပ်ထား တယ်လိုလည်း Google ကဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google service မပါတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Chrome ကို default ပါမလာပါဘူး။ ဒါတွေကတော့ မိမိ android ကို လှုံခြုံစွာ သုံးနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေထဲက အချို့ဖြစ်ပါတယ်။ Begineer တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
Blogging at sayyoethe.blogspot.com
♪ ဓါတ်ပုံများကို Effect ပေါင်းများစွာဖြင့် ဖန်တီးနိုင်တဲ့ - Photo.Grid.Collage.Maker.v4.772 APK ♫
ဓါတ်ပုံကိုပြုပြင်ပြီး အလှဆင်တဲ့ Application တွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ Photo Grid Collage Maker ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဗျာ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် သူ့မှာ Background , Sticker , Effect , Frame , Template အပြင်အခြားသော Feature တွေအများကြီးပါဝင်လို့ပါ။ Feature အပြည့်အစုံ ကိုအောက်မှာ အသေးစိတ်ရေးပြထားပါတယ်ဗျာ။ Application ရဲ့ နမူနာလုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို လည်းအောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြထားပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
Kaspersky Keys (24/08/2014)-(539 Kb)
24/08/2014 နေ့ထွက် KAV/KIS/ CRYSTAL/OpenSpace Security/Small Office
Security..Editions များအတွက် Keys များကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကီးအားလုံးမှာ
Redistration Entries(Reg) Keys များဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Kaspersky Editions များမှာ...
-Kaspersky CRYSTAL 2.0
FB မှပိုများကိုတိုက်ရိုက်ရယူရန် ဒီကနေဝင် သွားလိုက်ပါ
အမျိုးအစား: Kaspersky Key
♪ Giant Mushroom Forest LWP v1.0 Apk ♫
နောက်ထပ် Animation ဆန်ဆန် Live Wallpaper လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ တောထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းမှော်ဆန်တဲ့ မှိုပွင့်တွေပေါက်နေတဲ့ တောနက်ကြီးထဲမှာ ရောင်စုံဖားလေးများစွာ တို့ရဲ့ အလှအပကို Live Wallpaper အဖြစ်ဖန် တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ တင်ဖူးထားတဲ့ Live Wallpaper တွေ နဲ့မတူပဲတမူဆန်းပြားနေတာကို ပုံမှာမြင် ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အများနဲ့မတူဘဲထူးထူးခြားခြား Live Wallpaper တင်ထားချင်တဲ့ ဘော်ဒါများ သဘောကျစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ နာမည်ကြီးစကိတ်စီးဂိမ်း - Sub Sur v1.28.0 Beijing (Unlimited Everything) ♫
Subway Surfers Game ကလည်း နာမည်ကြီး Game ထဲမှာတစ်ခုအပါအ၀င်ပါပဲ။ အခုလည်း Version အသစ် ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ စကိတ်စီးပြီး Beijing ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါ။ စိတ်ကြိုက် ကစားနိုင်ဖို့အတွက် (Unlimited Gold) Hack ထားပြီးသား Game လေးကိုပဲတင်ပေးလိုက် ပါတယ်။ Unlimited ဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိလိုချင်တာတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ၀ယ်ယူကစားနိုင်ပါတယ်။ မကစားဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက် Game ပုံစံကိုနမူနာအနေ နဲ့အောက်မှာ Screen Shot ရိုက်ပြထား ပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.3.3 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
♪ အသွင်သစ်များနဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ - Next Launcher 3D Shell v3.17 APK (29-Aug) ♫
29-Aug 2014 မှာ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Next Launcher 3D Shell v3.16 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Andriod Laucher တွေအားလုံးထက် ပိုလန်းပါတယ်။ Android home screen အတွက် popular premium launcher နဲ့ Next Launcher 3D , 3D dynamic effects တွေနဲ့ လှပတဲ့ 3D Launcher တွေကိုတော့သူငယ်ချင်း တို့သိပြီးသားပါ။ Next Launcher 3D က တခြားသော Launcher တွေ ထက် 3D Theme Effect တွေ ပိုပြီး စုံလင်စွာ ပါသောကြောင့် ဖုန်းရဲ့ မူလ Framware ကဒီဇိုင်းထက် ပိုထူးခြားပြီး လှပသွားစေမှာပါ။ အောက်မှာ တင်ထားပေးတဲ့ Screenshot ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ သိနိုင်မှာပါ။ အခုနောက်ဆုံး ထွက် Version မှာ Next Launcher ရဲ့ UI ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲလာတာကို တွေ့မြင်ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ Andriod ဖုန်းရဲ့ Orginal Laucher ကိုသုံးရတာ ရိုးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Next Launcher 3D ကို စိမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါ။ ကြိုက်သွားမှာ အသေချာပါ။
ပိုတိုရှော့အတွက် ဦးထုပ်၊ပန်း၊ဆံပင်များ (1.96MB)
ပိုတိုရှော့ကိုစိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ပိုတိုရှော့အတွက် ဆံပင်၊မျက်မှန်၊ပန်း၊ဦးထုပ်လေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ပိုတိုရှော့ပုံများကိုရယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာLIKE နှိပ်ထားခဲ့လိုက်ပါနော် ပိုတိုရှော့အတွက် ဆံပင်၊မျက်မှန်၊ပန်း၊ဦးထုပ်လေးတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒေါင်းလုပ်နှစ်ခုပေးထားပါတယ်
♪ Telenor Sim Card နှင့်တွဲဖက်ပြီး Huawei ဖုန်းများကို သင့်တင့်သောဝန်ဆောင်မှုဈေးနှုန်းများဖြင့်ရောင်းချမည် ♫
စက်တင်ဘာလတွင် ချထားပေးမည့် တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်များနှင့်အတူတွဲဖက်၍ Huawei ဟန်းဆက် များကို သင့်တင့်သောဝန်ဆောင်မှု ဈေးနှုန်းများဖြင့် ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနောမြန်မာ မှသြဂုတ် ၂၆ ရက်တွင် သိရသည်။ တယ်လီနောမြန်မာနှင့် ဟွာဝေးဖုန်းကုမ္ပဏီတို့မှပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မှု သဘောတူစာချုပ်ကို သြဂုတ်၁၃ ရက်တွင်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ် စတင်ရောင်းချချိန်၌ ဟွာဝေးဟန်းဆက်များနှင့် တွဲဖက်ရောင်းချသွားရန် သဘောတူညီချက် ရှိခဲ့သည်။
ယင်းစာချုပ်အရ နှစ်ဦးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော အရောင်းမြှင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ဟွာဝေး၏ portfokio အား တယ်လီနော၏ ချန်နယ်များမှတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိပေးခြင်း နှင့် Brand နှစ်ခုစလုံး ပါဝင်သော ဈေး ကွက် ဆောင်ရွက်မှုများစသည့်တယ်လီ နောနှင့် ဟွာဝေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်များ ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ "မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကွက် ဦးဆောင်မှုမြင့်တဲ့ ဟွာဝေးဟန်းဆက်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ၀န်ဆောင်မှုစတင်တာနဲ့ ဆင်းမ်ကတ်နဲ့ တစ်ပါးတည်းရောင်းချပေးသွားမယ့် အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ၀န်ဆောင် မှု ဈေးနှုန်းတွေကလည်း သင့်တင့်သလိုအဆင်ပြေပြေသုံးစွဲနိုင်မယ့် ဟွာဝေး ဟန်း ဆက်နဲ့ တွဲရောင်းချသွား မှာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ ဟွာဝေးတစ်ခုတည်း ဖြစ် ပေမယ့် အခြားဟန်းဆက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ လည်းပေါင်းပြီး ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ သုံးနိုင်အောင်နောက်တပ် တစ်ပါတည်းရောင်းချသွားမယ့် အစီ စဉ်တွေလည်း ရှိပါတယ်"ဟု တယ်လီနောမှ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
တယ်လီနောထုတ် ဆင်းမ်ကတ်များသည် မည်သည့်ဖုန်း အမျိုးအစားတွင်မဆိုထည့် သွင်းအသုံးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ 2G နှင့် 3Gကွန်ရက်ကို သုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ယင်းဆင်းမ်ကတ်များသည် အခြေခံလူ တန်းစားများ လက်ရှိသုံးစွဲနေသည့် ကီးပတ်ဖုန်းများတွင်လည်း ထည့်သွင်းအသုံးပြု နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တယ်လီနောဆင်းမ်ကတ်များကိုငွေကျပ် ၁၅၀၀ ဖြင့် လာမည့် စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော်မြို့ကြီးများတွင် စတင်ရောင်းချပေး သွားရန်ရှိပြီး ဖုန်းခေါ်ဆိုရာ၌လည်းမည်သည့် ဆင်းမ်ကတ်အမျိုးအစားကိုခေါ်ဆိုသည်ဖြစ်စေ တစ် မိနစ် ၂၅ ကျပ်သာ ကောက်ခံသွားမည်ဟု တယ်လီနောက ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်း အင်တာနက်သုံးစွဲမှု မည်သို့ကောက်ခံမည်ကို ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက်သုံး စွဲမည့်ပရိသတ်၏ စိတ်ဝင်စားမှုမြင့် တက်နေပြီးအများပြည်သူ အသုံးပြုနိုင်မည့်သက် သာသည့် နှုန်းထားတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တယ်လီနောမြန်မာ လူမှုကွန်ရက် များမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုမှုများရှိနေကြောင်း သိရသည်။
Credit : စံတော်ချိန်
♪ အမေရိကန်အခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီက MPT ကို တရားစွဲမည် ♫
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် ၀န်ကြီးအပြောင်းအ လဲကြောင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသည့် အချက်အလက် များကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက် ခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်အ ခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုက စက်တင်ဘာတွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကို တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
‘‘ကုမ္ပဏီက US မှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံကနေ တစ်ဆင့်သွားပြီး တရားစွဲမယ်။ လုပ်ငန်းနစ်နာမှုကြောင့် ဒါရိုက် တာအဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကန် ဒေါ်လာ သန်း ၃၀ ရလိုမှုရယ်၊ ကျွန်မတစ်ဦးတစ်ယောက်အနေ နဲ့ နစ်နာမှုကြောင့် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ ရလိုမှုရယ် အမှုနှစ်ခုနဲ့ တရားစွဲသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်’’ ဟု အမေရိကန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ I.I (W.S) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင် ဒေါက်တာမြတ်နုခိုင်က ပြောသည်။
I.I (W.S) သည် TT Project ဟု အမည်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်း တစ်ခုကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီမှု စာချုပ်ကို ၁၉၉၉ ခုနှစ်က ဦး ဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမောင် မောင်တင်၊ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦး တင့်လွင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းတင်တို့ ပါဝင်လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း ၀န်ကြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အတွက် စာချုပ်ပါ အချက်များ ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ မြတ်နုလွင်က ဆိုသည်။
‘‘တရားစွဲလာမယ်ဆိုရင် တော့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ် နည်းအတိုင်းပဲ ဆက်သွားဖို့ ရှိပါ တယ်။ သူတို့က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ တရားစွဲမယ်ဆိုတာကို အသေး စိတ်မသိရသေးတဲ့အတွက် သီး ခြားမှတ်ချက်ပေးချင်တာမျိုး မရှိ ပါဘူး’’ ဟု မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၊ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ဌာနအင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးစိုင်းစိုး လင်းထွန်းက ပြောသည်။
စာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင် အ မေရိကန်နှင့် အိန္ဒိယတို့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်မည့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ဂြိုဟ်တုလှိုင်း နှုန်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ လေနယ် နိမိတ်ပေါ်တွင် ဖြတ်သန်းသွား လာခွင့် ပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးပြု ခွင့်အတွက် မြန်မာ့ဆက်သွယ် ရေးအနေဖြင့် တစ်မိနစ်လျှင် ကန် ဒေါ်လာ ငါးဆင့်နှုန်းရရှိမည်ဖြစ် ကာ တစ်လလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ငါး သိန်းမှ ငါးသန်းအထိ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူညီမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သို့သော် လုပ်ငန်းစတင်၍ တစ်နှစ်ခွဲခန့်အကြာ ဆက်သွယ် ရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန် စမ်း သပ်မှုများ ပြုလုပ်နေချိန်တွင် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး အသစ် တက်လာပြီး နောက်ပိုင်း၌ အ ကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ စာချုပ် ပါ အချက်အလက်များရပ်ဆိုင်း သွားခဲ့သည့်အတွက် I.I (W.S) အနေဖြင့် ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းအချို့လည်း ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရကြောင်း ဒေါက်တာမြတ်နုလွင်က ပြောသည်။
‘‘လုပ်ငန်းက စဖို့အတွက် အ သံကြည်လင်မှု စမ်းသပ်နေတုန်း ပဲ။ တကယ်အသုံးပြုတဲ့အထိကို တောင် မရောက်လိုက်ဘူး။ ၀န် ကြီးအသစ်တက်လာတဲ့နောက် ပိုင်းမှာ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့လည်း အဆက်အသွယ်မရတော့ ဘာမှလည်း မသိရဘဲနဲ့ လုပ်ငန်းတွေကလည်း ရပ်ခဲ့ရတယ်’’ ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက် ၍ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း သို့ အကြောင်းကြားစာ နှစ်ကြိမ် ပေးပို့ပြီး ယခုတစ်ကြိမ်တွင် တရားစွဲဆိုရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ကာ တရားစွဲဆိုခွင့်ရရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဂြိုဟ်တုနဲ့ပတ်သက် သည့်ဆက်သွယ်မှုများ အသုံးပြုမရအောင် တားမြစ်ခြင်းမျိုးလည်း ပြုလုပ်သွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ဒေါက်တာမြတ်နုလွင်က ပြောသည်။
▼ 2014 ( 7109 )
▼ August ( 599 )
Frozen Keyboard ကိုမိမိ ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပုံစံ...
English ဇတ်လမ်း ၊ သီချင်း ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေကို Fre...
♪ လုံခြုံစိတ်ချ ခိုင်ခန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေမဲ့...
♪ Android သမားတွေအတွက် လုံခြုံရေး အကြံပေးချက်များ ...
♪ အသွင်သစ်များနဲ့အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ - Next Launcher ...
♪ Telenor Sim Card နှင့်တွဲဖက်ပြီး Huawei ဖုန်းမျာ...
♪ အမေရိကန်အခြေစိုက် ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီက MPT ကို တရား...
♪ Ooredoo ၏ အင်တာနက် အသုံးပြုခကို 1MB လျှင် ၂၅ ကျပ...
♪ Music , Viedo ပေါင်းများစွာကိုလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုနိ...
အကောင်းဆုံး Launcher တစ်ခုဖြစ်တဲ့Next Launcher 3D ...
မိမိဖုန်းမှာအမြဲဆောင်းထားရန်YouTube v5.9.4.9 apk
★★ POISON 1500 (2014) Myanmar Movie ★★
Bad Asses (2014) မြန်မာစာတန်းထိုး
Eagle Eye (2008) မြန်မာစာတန်းထိုး
Appleseed Alpha (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
THOR. The Dark World(2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
Star Trek Into Darkness (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
★★ Star Wars Republic Commando Repack Full PC Game...
EZ CD Audio Converter v2.2.1.1 Multilingual With C...
★★ CHAOS Combat Copters HD No.1 v6.3.5 APK (All An...
Mobile ဖုန်း Hardware ပိုင်းလေ့လာနေသူတွေအတွက် Elec...
Android Clean Master V.5.8.1 apk
★★ [MOD] Zombie Defense v7.3 (Unlimited Money) (An...
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ Electronic သမားတွေအတွက် everyc...
★★ [MOD] DEAD TARGET v1.2.6 Apk (Unlimited Money) ...
♪ ဖုန်းခေါ်ဆိုရာမှာ ရောင်စုံမြန်မာ ဂဏန်းလေးတွေနဲ့အရ...
♪ Power Media Player v5.1.0 APK ♫
★★ Android Clean Master(Cleaner) FREE 5.8.1 apk (A...
Internet Download Manager (IDM) v6.21 build7With...
YouTube Video Downloader PRO v4.8.4.0 Multilanguag...
★★ Hot MP3 Downloader v3.3.5.8 Portable ★★
♪ SIM ကဒ်များကို နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လက်လီ အရောင်းဆိ...
♪ Facebook v17.0.0.0.15 Alpha APK (29-Aug) ♫
★★ Ashampoo Snap v7.0.8 + Portable Multilanguage ★...
★★ Max Uninstaller Pro 3.0.0.1 + Serial ★★
♪ Acer က Liquid Jade စမတ်ဖုန်းနှင့် Liquid Leap စမ...
Effects များစွာနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက် / အလှပြုပြင်မယ် ...
★★ EaseUS Partition Master 10.1 + All Edition Key ...
Avast Mobile Security & Antivirus Beta Premium v3....
မိမိAndroid ဖုန်းတွေမှာ အသံတွေကိုမိမိစိတ်တိုင်းကျခ...
i-mobile i-STYLE Q3 Firmware
★★ PrinterShare Mobile Print Premium v9.5.1 Apk (A...
★★ Volume Ace v3.3.2 Apk (All Android) ★★
♪ Effect ပေါင်းများစွာပါဝင်တဲ့ - Camera2v2.2.0 (...
★★ Vid2mp3 – Video Mp3 Converter v3.4 Apk (All And...
★★ Internet Download Manager 6.21 Build7+ Crack ...
Miley Cyrus Livewallpaper
★★ Redeemer: Mayhem APK Version: 1.0 (Android Gam...
မိမိဖုန်း မျက်နှာ/ နေရာပေါင်းများအတွင် folder ပြုလ...
♪ The Last Mobile Service and Training Centre မှ သ...
♪ Sapphire i-Tab Mini Tablet (Tablet Review) ♫
♪ 3G အသုံးပြုနိုင်သော ကွေးညွှတ်ထားသည့် Gear S စမတ်န...
★★ Sky Force 2014 Version: 1.24 Mod APK Unlimite...
★★ IP Hider Pro 5.0.0.2 + Crack ★★
♪ The Amazing Spider-Man2v1.2.0m Apk [Offline] 2...
Xiaomi ရှောင်မီ Mi Launcher
မိမိဖုန်းထဲမှာ ရာသီဥတုကို အလန်းလေးကြည့် မယ် Weathe...
♪ ဆန်းသစ်တဲ့ Effect တွေနဲ့ဖန်တီးနိုင်တဲ့ - Paper C...
★★ ABBYY Scan Station 9.0.4.2615 + Crack ★★
✏Samsung ၊ Iphone ၊ Sony ၊ HTC ဖုန်းကို အစစ်လားအတု...
★★ Gillmeister Rename Expert 5.6.0 Bilanguage + Cr...
♪ ဖုန်းထဲမှာ MP3 အဖြစ် Convert လုပ်ပေးမယ့် - Vid2m...
✏Mobile Journal Issue 167✏
★★ Bigasoft Video Downloader Pro 3.7.0.5340 Multil...
♪ Ooredoo ၏ Unlimited Plan ကို လာမည့်နှစ်မှ ဝန်ဆော...
♪ တက္ကသိုလ်အားလုံးကို အင်တာနက်စနစ် ချိတ်ဆက်ပေးမည်ဟု...
♪ အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်သည့် ပမာဏ5GB ကို သြဂုတ်လအ...
စာဖတ်ရူနိုင်ရန်လိုအပ်မည့် Moon+ Reader Pro v2.6.3 ...